Etu esi etinye ndị otu akwụ ụgwọ na WordPress Site | Martech Zone
Otu n'ime ajụjụ ndị m na-aga n'ihu bụ ma m maara na mwekọrịta ezigbo ndị otu maka WordPress. WishList bụ ngwungwu zuru oke nke na-agbanwe saịtị WordPress gị na saịtị ndị na-arụ ọrụ nke ọma. N'ime 40,000 WordPress saịtị na-ama na-agba ọsọ a software, ya mere ọ pụtara, mma ma na-akwado!
WishList Akụkụ ndị otu so na
Unlimited Otu ndị - Mepụta silver, gold, platinum, ma ọ bụ ọkwa ọ bụla ọzọ ịchọrọ! Buru ndi ozo n’uzo inweta uzo di elu - ha niile n’ime otu blog.
Ejikọtara WordPress - Ma ị na-ewu saịtị ọhụrụ ma ọ bụ na-etinye ọnụ na saịtị WordPress dị ugbu a, ịwụnye WishList chọrọ naanị ịpịpụta faịlụ ahụ, bulite ya, ma rụọ ọrụ mgbakwunye ahụ!
Ngbanwe ndi otu - Mepụta usoro otu ndị akwụghị ụgwọ, nnwale ma ọ bụ ndị akwụrụ ụgwọ - ma ọ bụ ngwakọta atọ ndị a.
Njikwa Ndị Dị Mfe - Ele ndị otu gị, aha ndebanye aha ha, ọkwa ndị otu, na ọtụtụ ndị ọzọ. Mfe kwalite ndị otu, duga ha na ọkwa dị iche iche, kwusi ndị otu ha, ma ọ bụ hichapụ ha kpamkpam.
Usoro nzipu nke usoro - Gụsịrị ndị otu gị na ọkwa ọzọ. Ọmụmaatụ, mgbe 30 ụbọchị, ị nwere ike na-akpaghị aka nweta nkwalite òtù si a Free Trial ka silver ọkwa.
Njikwa ọdịnaya elele - Naanị pịa “Zoo” bọtịnụ iji kpuchido ọdịnaya na-enweghị atụ maka ndị otu ọkwa. Mepụta ndị otu “modular” ma zoo ọdịnaya sitere na ọkwa ndị ọzọ.
Njikọ Cartzụ ahịa .zụ ahịa - Seamlessly integrates na ndị kasị ewu ewu na ịzụ ahịa ụgbọ usoro, tinyere ClickBank, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Multi-Ọkwa Access - Nye ndị otu gị ohere inweta ọtụtụ ọkwa n’ime ndị otu gị. Dịka ọmụmaatụ, mepụta ebe nbudata dị n'etiti iji nye ndị otu ọkwa niile ohere.
Jiri njikọ njikọ anyị yana
Tags: WishlistWordPresswordpress Otuwordpress Otu plugin
Ree, Ọrụ na Ahịa na Salesforce1